TSY FANDRIAM-PAHALEMANA ANY ATSIMO : Averin-kasina ny fomban-drazana hamerenana ny filaminana
Faritra maro any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy iny no tena mbola anjakan’ ny tsy fandriam-pahalemana mivaivay. 29 juillet 2021
Ny halatr’omby, fanafihan-dahalo miharo fakàna an-keriny, fandrobana miaraka amin’ny doro trano…, ireo no mateti-piseho tato ho ato. Tsy mitandro hasasarana amin’ny hamerenana amin’ny laoniny ny filaminana amin’ireo toerana voakasika ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.
Anisan’ireo Distrika lasibatra matetika amin’ny asa ratsy ataon’ny dahalo i Betroka. Tsy ity farany irery fa Distrika maro mandrafitra iny tapany atsimon’ny Nosy iny no mitondra faisana noho ny afitsok’ireo olon-dratsy. Manao ny ezaka rehetra ny Fanjakana amin’ny alalan’ny fanatanterahana an’ireo hetsika fampandrian-tany maro samihafa mba himpihenana sy hifehezana mihitsy ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity. Araka ny fantatra anefa dia ao anatin’ny fe-potoana voafetra ihany no mangingina ny fandrobana ataon’ireo malaso. Izany hoe, mandritra ny mampamaivaivay ny hetsika ataon’ireo Miaramila. Aorian’izay anefa dia miverina mirongatra indray ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatra ny aina afoy dia misy fiantraikany maro eo amin’ny fiainan’ny mponina ihany koa no aterak’izany satria tsy afaka mamokatra ara-dalàna ireo tantsaha.
Raha tsiahivina vao tamin’ny faramparan’ny volana febroary lasa teo iny no nisehoana fanafihan-dahalo mahatsiravina tany Betroka. Sivy mianaka no indray nodoran’ny dahalo velona tao an-trano. Maty tsy nisy tamingana ireto fianakaviana iray ireto tamin’izany. Mampihoron-koditra ny zava-miseho. Antony lehibe anetsehana ireo karazana hetsika rehetra mba hahafahana mamerina ny fandriam-pahalemana any an-toerana izany. Fikambanana tsy manao politika (ONG) iray no nanapa-kevitra hanetsika ny mponina amin’ny alalan’ny famerenana ny fomban-drazana izay nifampifehezan’ny fiarahamonina tany amin’ny tapany atsimon’ny Nosy, fony fahagola.
“Kitika” fomba nampilamina taloha
“Fomban-drazana tsy hita izay maharatsy azy”, anisany fomba fiteny malagasy izany. Tafiditra ao anatin’izany ny “Kitika” izay fomba taloha be nampiasain’ ireo mponina tany amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy mba hahafahana mifehy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eo an-tanàna. Anisany tena mampalaza ity fomba iray ity ihany koa ny fanamafisana ny fifampitokisana eo amin’ny samy mpiray tanàna ka antoka lehibe hampanjakana ny filaminana. “Nahafahana nifehy ny fandriam-pahalemana sy nametrahana ny filaminana tany amin’ny Faritra Atsimo iny ny fanaovana ny Kitika”, hoy ny loharanom-baovao. Nambaran’ny solontenan’ny mponina fa voriana daholo ny vahoaka isaky ny Fokontany ka namonoana omby, eo amin’ireo heverina ho toerana masina ao amin’ilay tanàna no nanaovana izany, ka ny Ampanjaka no nitarika ny lanonana. “Famonoana omby amin’ireo toerana masina eny anivon’ny Fokontany ka ireo Ampanjaka ao an-tanàna no manatanteraka izany”, hoy hatrany ny voalaza. Araka izany dia ny famerenana sy ny fanomezan-kasina indray an’ity fomban-drazana ity no heverin’izy ireo fa hahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana maharitra any Atsimo.
Hamafisina ny fifampitokisan’ny mpiara-monina
Ankoatra ny famerenana ny “Kitika” dia mitana anjara toerana lehibe amin’ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny fifampitokisana ihany koa ny famerenana ny fihavanana sy ny fifampitokisana eo amin’ireo mpiara-monina. Ny ONG Tokotany Iraisana miaraka amin’ny sampan-draharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fifindra-monina no tompon’antoka voalohany amin’ny fanetsehana indray an’ireo mponina fa hahay hihavana sy hifampatoky ka ho lavitry ny tsy filaminana samihafa ny fiarahamonina, ny Fokontany, ny Kaominina sy ny Distrika izay mipaka any amin’ny Faritra. Kaominina miisa 12 any Betroka no fantatra fa hanatanterahana an’ity tetikasa ity. “Misy Kaominina 12 hanaovana izao hetsika izao. Tanjona voalohany ny famerenana indray ny fihavanana sy ny fifampitokisana eo amin’ireo mpiara-monina. Maro ny zavatra natao ary tsapa fa ny fomba amam-panao malagasy no manana ny lanjany manokana amin’izany fihavanana izany”, hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny ONG Tokontany Iraisana. Nohamafisiny hatrany fa ny fanamby ao anatin’izao hetsika izao dia ny hanana fiarahamonina lavitry ny tsy filaminana samihafa, hahafahan’ireo tantsaha mamboly sy miompy am-pilaminana.
Nalaza ratsy tamin’ny tsy fandriam-pahalemana
Tsy mitsitsy ireo dahalo sy ny malaso mpangalatr’omby. Distrika tena mena tamin’ny asan-dahalo raha i Betroka. Efa napetraka tany an-toerana ny ivon-toerana manokana miady amin’ny dahalo izay azo lazaina ho nampihena ny trangana asa ratsy tamina Kaominina maro tany an-toerana. Tato anatin’ny telo taona anefa izay dia mbola azo lazaina ho tsy fongana tanteraka izay tsy fandriam-pahalemana ao Betroka izay. Ny halatr’omby no tena nanjaka, ny vono olona sy ny fandrobana izay tsy mifidy ora intsony fa na amin’ny antoandro be nanahary izao aza dia manao ny asa ratsiny ireo dahalo. Tena nampalaza ny Faritr’i Betroka iny izany. Ankehitriny, ny hampilamina tanteraka an’ity Distrika ity no tena imasoan’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy any an-toerana miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka isany avy. Efa manomboka hita taratra any an-toerana ihany koa ireo lafim-pampandrosoana maro izay mandray anjara feno amin’ny fampihenana izany tsy fandriam-pahalemana izany. Anisan’izany ny fanamboaran-dalana izay mampihena ny fanakanan-dalana sy fanafihana taksiborosy.